I-Linux kernel 5.3 isivele ikhishiwe, yazi ukuthi yini okusha | Kusuka kuLinux
Ngemuva kwezinyanga ezimbili zentuthuko, ILinus Torvalds yethule inguqulo ye-Linux kernel 5.3 ngawo phakathi izinguquko okuphawuleka kakhulu Ukusekelwa kwe-AMD Navi GPU kuqokonyisiwe, Amaprosesa we-Zhaoxi kanye ne-Intel Speed ​​Select Power Management Technology nezinye eziningi.
Isimemezelo senguqulo entsha, ILinus ikhumbuze bonke abagqugquzeli abakhulu bokulawulwa komthetho ukuthuthukiswa kernel gcina isimilo esifanayo sezinto zesikhala somsebenzisi. Izinguquko ku-kernel akumele nganoma iyiphi indlela zephule izinhlelo zokusebenza esezivele zisebenza futhi ziholele ekuhlehlisweni kwezinga lomsebenzisi.
Ngasikhathi sinye, ukwephulwa kokuziphatha kungadala nje kuphela ushintsho ku-ABI, ukususwa kwamakhodi noma amaphutha aphelelwe yisikhathi, kepha futhi nomphumela ongaqondile wokusebenza ngokuthuthuka okusebenzayo.
1 Yini okusha in the Linux Kernel 5.3
1.1 Izinsizakalo zememori nezesistimu
1.2 Disk subsystem, I / O, kanye nezinhlelo zamafayela
1.3 Ukusebenziseka kahle nokuphepha
Yini okusha in the Linux Kernel 5.3
Kwezinto ezintsha ezivelele kule nguqulo entsha yeLinux Kernel 5.3 singakuthola lokho ku- Umshayeli we-Amdgpu ungeza ukusekelwa kokuqala kwama-AMD NAVI GPUs (RX5700), okubandakanya i-Base Controller, Display Interaction Code (DCN2), GFX ne-Compute Support (GFX10), SDMA 5 (DMA0 System), Power Management, neMedia Encoders / Decoders (VCN2).
amdgpu futhi kuthuthukiswe ukwesekwa kwamakhadi weVega12 neVega20 GPU, okwengezwe amakhono angeziwe wokulawula amandla.
Kumshayeli we-DRM wamakhadi wevidiyo we-Intel wamachips we-Icelake, kuqaliswa imodi yokulungisa i-gamma entsha enezingxenye eziningi. Kungezwe amandla okukhombisa nge-DisplayPort ngefomethi ye-YCbCr4: 2: 0.
Izinsizakalo zememori nezesistimu
Ku-kernel 5.3, Kwethulwa ukwesekwa kwe-Intel Speed ​​Select Power Management Technology, yini iyatholakala kumaseva wokukhetha anama-processor we-Intel Xeon. Lobu buchwepheshe bukuvumela ukuthi usethe ukwahlukanisa ukusebenza nokusebenza kokuhlelwa kwama-cores ahlukahlukene we-CPU, kukuvumela ukuthi ubeke phambili ukusebenza kwemisebenzi eyenziwe kuma-cores athile, udele ukusebenza kwamanye ama-cores
Ngakolunye uhlangothi kuLinux Kernel 5.3 izinqubo ezikhaleni lomsebenzisi zinamandla okulinda isikhathi esifushane ngaphandle kokusebenzisa izihibe kusetshenziswa umyalo we-umwait. Lo myalo, kanye ne-umonitor kanye nemiyalelo yokuphumula, izonikezwa kuma-chips "Intel" eTremont "alandelayo, futhi izovumela ukuqaliswa kokubambezeleka okusindisa amandla futhi okungathinti ukusebenza kweminye imicu lapho kusetshenziswa i-Hyper Threading.
Ngokwakhiwa kwe-RISC-V, ukungezwa kwamakhasi amakhulu ememori kungeziwe (amakhasi amakhulu).
Disk subsystem, I / O, kanye nezinhlelo zamafayela
Ohlelweni lwefayela le-XFS, inketho yokudlula eyakhiwe ngemicu eminingi isetshenziswa (ngokwesibonelo, lapho ubheka izilinganiso). Kungezwe ioctl BULKSTAT ne-INUMBERS entsha, enikeza ukufinyelela kwemisebenzi ebonakale kuhlelo lwesihlanu lwefomethi ye-FS, njengesikhathi sokuzalwa se-inode kanye nekhono lokusetha imingcele ye-BULKSTAT ne-INUMBERS yeqembu ngalinye le-AG (Ama-Assignment Groups) .
Ngesikhathi ukusekelwa kwesiqondisi se-voids kungezwa kohlelo lwefayela le-Ext4 (amabhulokhi angaxhumekile). Ifulegi elithi 'i' licutshungulwa ngamafayela avulekile (bhala ukuvinjelwa esimweni esisodwa uma ifulegi lisethiwe lapho ifayela selivele livulekile).
I-F2FS ingeza inketho yokunciphisa umqoqi kadoti lapho usebenza endaweni yokuhlola = imodi ekhutshaziwe.
Kungezwe amandla okusingathwa kwefayela lokushintshana ku-F2FS nge-I / O eqondile. Kubo bonke abasebenzisi, ukwesekwa kungezwe ngokulungiswa kwefayela nokwabiwa kwamabhulokhi kulawo mafayela.
Ukusebenziseka kahle nokuphepha
Ingqikithi ifaka i-hypervisor yamadivayisi we-ACRN ashumekiwe, ebhalwe ngokuzimisela komsebenzi wesikhathi sangempela nokufaneleka kokusetshenziswa ezinhlelweni ezibucayi engqondweni. I-ACRN ihlinzeka ngaphezulu okuncane, iqinisekisa ukubambezeleka okuphansi, nokuphendula okwanele lapho ixhumana nemishini.
Imodi yomsebenzisi we-Linux ingeze imodi ekuvumela ukuthi wehlise ijubane noma usheshise isikhathi endaweni ebonakalayo ye-UML ukwenza lula ukulungisa iphutha kwekhodi ehlobene nesikhathi. Ngaphezu kwalokho, start parameter added evumela ukuqala iwashi lesistimu kusuka iphuzu elithile ngefomethi ye-Epoch.
I-Netfilter yama-nftables ingeza ukusekelwa kwezindlela zokuhlunga amaphakheji asheshiswa ngehadiwe ngokusebenzisa i-Flow Block API engezwe kubashayeli. Amathebula wemithetho ephelele anezintambo zonke angathwalwa eduze kwama-adaptha enethiwekhi. Ukufakwa kwenziwa ngokubopha i-NFT_TABLE_F_HW etafuleni.
Imethadatha elula yezingqimba ze-Layer 3 ne-4, ukwamukela / ukwenqaba izenzo, ukufaniswa nge-IP kanye nezimbobo zenethiwekhi zomthumeli / zomamukeli nohlobo lwephrothokholi kuyasekelwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-Linux kernel 5.3 isivele ikhishiwe, yazi okusha
Inguqulo ye-Fedora 31 beta isivele ikhishiwe, yazi okusha